eNasha.com - चक् दे ! कुछ सिख् ले !
जुन बेला भारत विकासशील राष्ट्रमै गनिन्थ्यो, त्यो बेला पनि उसले विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभावलाई राम्रैसँग कायम गर्न जान्दथ्यो । जुन बेला भारत धेरै कुरामा विदेशी दातृ संस्था वा विश्व बैंकमै बढी आश्रति थियो, तर पनि छिमेकमा 'बडे भाइ' कै भूमिका निर्वाह गर्दथ्यो । अहिले आर्थिक उन्नतिसँगै 'बलिउड'ले आफूलाई समाज हाँक्न सक्ने माध्यम बन्ने लालसा व्यक्त गरिरहेको छ । त्यसो त भारतमा सिनेमाको प्रभाव यति बढी छ कि त्यसले समाजलाई डोर्‍याउने भूमिका खेल्न सक्छ । केही समय गरीव जनताको 'फस्ट्रेशन'लाई पाकिस्तानका विरुद्धमा उपयोग गरेर बलिउडले निकै पैसा कमायो । भारतीय राष्ट्रवाद भनेकै पाकिस्तानको विरोध गर्नु भन्नेसम्म बुझिन्थ्यो । तर अहिले भारतीय राष्ट्रवादले अर्थ फेरेको छ । त्यो पाकिस्तानको विरोध होइन भन्नेसम्म आइपुगेको छ ।
बलिउडको दर्शकको नाताले मैले देखेको केही परिवर्तन तपाइँसँग साट्न चाहन्छु । जब चलचित्रमा एन्आरआई घुसे, अर्थात् चलचित्रको पर्दामा विदेशी केटा र स्वदेशी केटीको प्रेमकथा गाँसिन थाल्यो, राष्ट्रवादको भारतीय अर्थ परिवर्तन हुन थाल्यो । चाहे त्यो 'दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे' होस् या 'आ अब लौट चलेँ' अथवा 'परदेश' । त्यसले आफ्नो भूम्रि्रतिको मोहका बारेमा बतायो । ऋषि कपुरको पहिलो निर्देशन रहेको 'आ अब लौट चलेँ'मा त हरेक पटक क्रिकेटको निहुँमा झगडा गरिरहने पाकिस्तानी मूलका अमेरिकी र भारतीय मूलका अमेरिकीको बडो मीठो व्यङ्ग्य छ । तर तिनको मित्रता उदाहरणीय देखाइएको छ ।
भारतीय राष्ट्रवादमा आएको परिवर्तनको एउटा मीठो उदाहरण 'वीरजारा'ले दिएको छ । यद्यपि बलिउडको व्यापार नीतिका कारण पाकिस्तानविरोधी राष्ट्रवादमा परिवर्तन आएको केहीको धारणा भए पनि पछिल्लो समय बनेका केही चलचित्रले भारतीय राष्ट्रवाद भनेको पाकिस्तानको विरोध गर्नु या हरेक घटना/दुर्घटनामा आईएसआईलाई जोड्नु मात्र होइन भन्ने कुरामा वकालत गरेका छन् ।
यही मेसोमा 'चक् दे इण्डिया' बजारमा आएको छ । शायद तपाइँले पनि हेर्नु भएको हुँदो हो । हर्ेर्नु भएको छैन भने- हेर्नुस् । मलाई मूलतः दुइ कारणले यो चलचित्र मन पर्‍यो । एउटा- भारतीय राष्ट्रवादमा आएको परिवर्तनको यो पछिल्लो उदाहरण भएकाले । अर्को, यसको कथा मलाई नेपालकै कथाजस्तो लाग्यो, त्यसैले ।
भारतीय राष्ट्रवादमा एन्आरआईहरुको आफ्नो माटो प्रतिको मोहलाई पस्किसकेपछि अब के ? भन्ने ठूलो प्रश्न थियो । किनभने सन् १९९५ मा रिलिज भएको 'दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे' (डीडीएलजे) को सिद्धान्त बिक्न थालेको ठ्याक्कै ११ वर्षभइसकेको थियो । 'नमस्ते लण्डन' त्यसको पछिल्लो उत्तम उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । अब नयाँ सिद्धान्त बलिउडले कोर्न जरुरी थियो । त्यसको खाका त्यसो त 'लगान'ले कोरिसकेकै थियो । 'लगान'ले भारतीय जनताले आफूलाई आफैँमाथि विश्वास गर्न सिकाएको थियो । हामी निर्धा भएर के भो, हामीसँग 'हौसला' छ भन्ने पाठ त्यो चलचित्रले सिकाएर गइसकेको थियो । तर पनि बलिउड डीडीएलजेकै परिभाषामा केन्द्रित थियो । त्यसलाई 'चक् दे इंडिया'ले अझ घनिभूत पार्ने प्रयास गरेको छ ।
चलचित्रमा एउटा दृश्य छ- भारतीय महिला हकी टीम विश्वकपका लागि लड्न भारतभरबाट जम्मा भएपछि टिमको कोच कबिर खान (शाहरुख खान) ले सोध्छ- 'तिमी कहाँबाट आयौ ?' देशको कुनाकाप्चाबाट आएका महिलाहरुले आफ्नो नाम र आएको राज्यको नाम भन्छन् । राज्यको नाम भन्नेलाई एकातिर राखेर उसले भन्छ- 'मलाई आफ्नो स्टेट (राज्य)का लागि मात्र खेल्ने महिला चाहिएको होइन, मलाई देशका लागि खेल्ने चाहिएको हो ।'
हकी, सबैलाई थाहा भएकै हो, भारतको राष्ट्रिय खेल हो । जसरी भारतले क्रिकेटमा ठूलो प्रगति गरेको छ, हकीमा उसको स्थिति वास्तवमै दयालाग्दो छ । यो सिनेमाको निर्माणले जनतालाई हकी खेलमा रुचि जगाउन सक्छ । रुचि नजगाए पनि हकी खेलमा केकस्ता समस्या छन्, कति उपेक्षित छ यो खेल भन्ने जस्ता गम्भीर कुराहरु सानातिना दृश्यले प्रष्ट पारेको छ ।
भ्रष्टाचार र उपेक्षाले गाँजेको हकी खेललाई कसरी उठाउने त ? यो प्रश्नको सरल जवाफ दिएको छ चलचित्रले । त्यसो त 'चलचित्रले समाधान दिने होइन कि प्रश्न उठाउने पो हो त !' भन्ने सिद्धान्त पनि चलचित्रमा नभएको होइन, तर पनि चलिआएको रीतलाई नभाँची प्रश्न गर्दै त्यसको समाधान सुझाउनु पनि राम्रै कुरा हो, होइन र ?
यो चलचित्र हेरिसकेपछि मलाई हालै केही समयअघिको महिला क्रिकेट टिमले नेपाललाई सेमीफाइनलसम्म पुर्‍याएको घटना ताजा भएर आयो । ती गाउँले महिलाले जीवनमा पहिलो पटक ब्याट समातेका थिए । तर, हौसला र कटिबद्धताले तिनलाई यति अघि बढायो कि नेपाली महिला क्रिकेट टिमको इतिहास रचेर घर फर्किए ।
वास्तवमा समस्या हामी जनतामा छैन, नीति निर्मातामा छ । तिनको उद्देश्य र कटिबद्धतामा खोट छ, जसका कारण हामीले गर्न सक्ने जति पनि गर्न सकेका छैनौँ । केही समयअघि फूटबललाई लिएर एउटा डकुमेन्ट्री पत्रकार गिरिश गिरिले बनाएका थिए । जसमा वीरगञ्जका युवाहरुको फूटबल मोह र तिनको यात्रा समेटिएको थियो । त्यहाँ पनि साधनको अभावका वावजूद, हौसला र खेलमोहको उत्तम प्रदर्शनका बारेमा बताइएको थियो ।
त्यसो त यो चलचित्रका बारेमा लेख्न मिल्ने धेरै कुरा छन् । तर खेलप्रेमी या खेलाडीले त यो चलचित्र एक पटक हेर्नै पर्छ । महिलाले त झनै हेर्नुपर्छ किनभने महिला भएकै कारणले पाएका फाइदा र हुने बेफाइदाका बारेमा पनि रोचक ढङ्गले उठाइएको छ । देश पछाडि पर्नुको कारण मूलतः जनतामाथिको अविश्वास, तिनमाथि रैतिको व्यवहार र निजी स्वार्थको टकराव भएको यो चलचित्रबाट पाठ सिक्न पाइन्छ । नेताले मात्र होइन खेलकूदका लागि मरिमेटिरहेका खेल नेताहरुले पनि यो सिनेमाबाट केही सिकून् !
अभिनेता हल्ला रिलिज सेक्स समारोह सेलेब्रिटी प्रविधि सुटिङ अभिनेत्री पेज थ्री